Indawo yokuhlala e-Orosháza yabantu abangu-1-2
Le ndawo itholakala enkabeni yedolobha, endaweni ethule ephethwe umndeni ezindaweni ezingaphansi kwedolobha.
Isikhungo sedolobha siqhele ngamamitha angu-500, lapho kuba khona amakhonsathi nemicimbi njalo ngempelasonto ehlobo, izitolo, amakhefi, izindawo zokudlela kanye nepaki elikhulu. Ifulethi linethala elingu-42 m2 no-15 m2, elifanele abantu abangafika kwabangu-6 (abadala abangu-4 nezingane ezi-2 noma abantu abadala abangu-5), hhayi igumbi elilodwa kuphela, kodwa indawo yonke yokuhlala lapho kuhlala khona yena nomndeni wakhe kuphela.
Inombolo ye-NTAK: EG19009581 indawo yokuhlala yangasese
Incazelo yendawo yokuhlala:
- Ifulethi linamakamelo angu-2, ikhishi elihlomele eli-1, igumbi lokugezela elingu-1 elinobhavu wokugeza kanye nendlu yangasese, ukuvulwa kwethala elikhulu elisuka ekamelweni lakho.
- ifenisha ekhululekile, imvelo ejabulisayo
- I-Wi-Fi yamahhala iyatholakala kulo lonke efulethini
- Indawo iphephile, ungakwazi ukupaka emgwaqweni, kodwa ungakwazi futhi ukuma egcekeni (mahhala).
Imahhala ukusebenzisa namashaneli angu-130 i-LED TV (i-Orion T28D) ene-HDMI, i-PC, i-SCART, uxhumano lwe-USB, amafasitela anetha omiyane, amafeni, amalambu, itafula le-patio nezihlalo.
2 90 * 200 cm imibhede eyodwa engaphushwa ndawonye njengoba kudingeka (ikhululekile, ingena ngaphandle komthungo),
1 usofa ongadonselwa embhedeni womuntu omdala oyedwa noma izingane ezi-2 110 * 190 cm, futhi
1 umbhede ophindwe kabili 160 * 200 cm
IKHISHI LETIYE: Ikhishi elinezitsha nezinto zokusika, umenzi wekhofi, isiqandisi - esinefriji encane, i-induction hob, itafula lokudlela elingamamitha angu-2 ubude ukuze wonke umuntu ahlale ngokunethezeka ngesikhathi esisodwa.
IBHAFA: elinobhavu; ifakwe: amathawula Ithawula lesandla elingu-1 nethawula elikhulu elingu-1 umuntu ngamunye, insipho, iphepha lasendlini yangasese
- Ukusetshenziswa kwe-inthanethi kwe-WIFI kwamahhala
- izindawo zokupheka nezokosiwa engadini
- ukudluliswa kwamahhala kusuka esiteshini sesitimela / sebhasi (ukuhlala okungenani ubusuku obu-2, kuphela ngokuhlelwa kwangaphambili)
Amakamelo azophuma ngo-14:00 futhi kufanele aphume ngo-10:00 ngosuku lokuhamba.
Ukubhema akuvunyelwe endlini, ukubhema kungenzeka ekuvuleni kwethala langasese kusuka ekamelweni.
Asikwazi ukwamukela izilwane ezifuywayo (izinja, amakati).
Imvelo eshadile yomndeni endaweni yedolobha. I-Gyopárosfürdő iseduze, engafinyelelwa ngezinyawo.
Bahlala endaweni ephansi yendlu. Izinga eliphezulu lincike ngokuphelele kusivakashi. Amakamelo wonke ayakhiywa ngokhiye wokuphepha! Asichithi isikhathi nezivakashi, asizihluphi ngaphandle uma zidinga inkampani ngokukhethekile. Yiqiniso, kulesi simo siyajabula ukubasiza.
Bahlala endaweni ephansi yendlu. Izinga eliphezulu lincike ngokuphelele kusivakashi. Amakamelo wonke ayakhiywa ngokhiye wokuphepha! Asichithi isikhathi nezivakashi, asizihluphi nga…